Kune Innovation Pano paSilicon Prairie | Martech Zone
Ini ndakapedza zuva rinoshamisa semumwe wevatongi veMira Awards yegore negore. Kunyange ini ndisingakwanise kukuudza kuti ndiani ahwina (uchafanirwa kuenda ku Mira Mipiro musi waMay 15). Ini ndinogona kukuudza kuti kune humwe hunoshamisa hunyanzvi huri kuitika muno muIndiana.
Ini ndaive mutongi muzvikamu zviviri zveSocial Media neCorporate IT. Iwo musiyano usinganzwisisike unofamba kubva kune nimble vanamuzvinabhizimusi kuenda kune zvitsva manger mukati zvetsika zvikurumasangano. Mhedziso yangu - Kugadziridza kuri kwese kuno muSilicon Prairie semafemu emuno anowana nzira dzekugadzira dzekushandisa tekinoroji kudyidzana nevatengi, tarisiro nevashandi.
Heino ingori rondedzero yemakambani anotonhorera andakave nemukana wekusangana svondo rapfuura:
Anacore -Kuvandudza ruzivo rwevarwere nechavo Triage chigadzirwa
ExactTarget - Inoenderera mberi nekutsvaga nzira nyowani dzekugovana ruzivo nevatengi vavo nevashandi vachishandisa makumi matatu nematanhatu nzvimbo yavo yekudyidzana.
Imavex - Nevhidhiyo yavo nyowani yekumhanyisa ivo vanogona kuendesa zvemukati zvisina mushe kune chero nhare mbozha
Forum Chikwereti Union -Akashandura CRM yemukati uye Workflow system kuita chimwe chinhu chavanogona kushambadzira kune mamwe masangano echikwereti, vachichinja mari kuita chirongwa chinogadzira mari.
Chikomo-Rom - Tendeuka miitiro mirefu yekumagumo, ivo vakanyatso shandura maitiro avo ekuvheneka uye kugovera zviwanikwa kumapurojekiti nyowani, zvichikonzera kuti mari iendeswe kuzvirongwa ndiyo inonyanya kudzoka kutanga!
Ndinovimba muchabatana neni mukupemberera zvakaitwa neizvi nemamwe makambani makuru eIndiana kuMira Awards.
Tags: anacorechaizvoforum chikwereti mubatanidzwagomo-romimavexindianapolissilicon prairiesilicorn mupata